Otu esi etinye Python 3.10 na Fedora Linux - LinuxCapable
September 23, 2021 August 16, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Python 3.10 site na iji DNF
Wụnye Python 3.10 na Fedora Linux site na Isi Iyi
Python bụ otu n'ime asụsụ kachasị ewu ewu na ọkwa dị elu, na-elekwasị anya na ọkwa dị elu yana ngwa dabere na ihe sitere na mpempe akwụkwọ dị mfe gaa na algọridim mmụta igwe dị mgbagwoju anya. Eke Ọgba 3.10 bụ ntọhapụ kachasị ọhụrụ na agụghị ya ka ọ kwụsiri ike ma e jiri ya tụnyere Python 3.9, mana a na-atụ anya ka emechaa onye ntuli aka ikpeazụ na 4th nke Ọktoba 2021.
Ụfọdụ atụmatụ Python nwere ike ime:
Maka ndị ọrụ yana ọkachasị ndị mmepe chọrọ ịnwale ntọhapụ ọhụrụ Python, ị ga-ama otu esi etinye Python 3.10 na Fedora Linux na njedebe nke ntuziaka a. Otu ụkpụrụ ahụ ga-arụ ọrụ na ọtụtụ ụdị Fedora Linux.
OS akwadoro: Linux Fedora 34
Melite gi Fedora Linux Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Iji wụnye ụdị Python 3.10 kachasị ọhụrụ bụ usoro kwụ ọtọ na Fedora Linux, ebe ọ bụ ụdị Rhel dị elu nke na-elekwasị anya na ụdị ngwugwu kachasị ọhụrụ na-enweta ume ọhụrụ kwa ọnwa isii.
Nke mbụ, hụ na ịlele ma agbanyere ebe nchekwa nnwale:
Na-esote, tinye Python 3.10 na iwu na-esonụ:
Ọmụmaatụ nke ngwugwu a ga-etinye:
ụdị Y wee pịa tinye igodo iji gaa n'ihu na ntinye.
Ozugbo emechara, kwado ya site na ịlele ụdịdị dị ka ndị a:
Nke ahụ bụ ya, ma ị wụnye Python 3.10.
Nhọrọ ọzọ maka ndị na-eche ihe ịma aka ma ọ bụ chọrọ ụfọdụ ihe nrụpụta dị elu site na ebe nchekwa git nke isi iyi nwere ike ịhọrọ ịwụnye ozugbo site na isi mmalite. Isi okwu dị na usoro a bụ na ị nweghị ike imelite njikwa ngwugwu DNF ngwa ngwa dị ka ị ga-achọ ma ọ ga-adị mkpa ịchịkọta maka mgbanwe ọ bụla.
Ebe nchekwa faịlụ dị obere, yabụ na ọ gaghị ewe ogologo oge iji budata. Ozugbo emechara, wepụ ihe ndekọ ahụ:
Ọ ga-adị mkpa ka ị gbanwee gaa na akwụkwọ ndekọ aha ma na-agba ọsọ nhazi nhazi, nke na-eme isi ihe na-agba ọsọ-site na ndepụta nlele iji hụ na ndabere niile dị maka nrụnye na-arụ ọrụ.
Mara, na (-nkwalite-nkwalite) akwadoro ka ọ na-ebuli ọnụọgụ abụọ Eke Ọgba site n'ịgba ọtụtụ ule mana ọ na-ewekwu oge iji asọmpi. N'ozuzu usoro a kwesịrị iwere nkeji ole na ole, ya mere a na-atụ aro ka ị ghara ịwụ.
Ihe nrụpụta ngwụcha ihe atụ:
Mara, na (-j) dabara na ọnụọgụ cores dị na sistemụ gị iji mee ka oge nrụpụta dị ngwa. Ọ bụrụ na ị nwere ihe nkesa dị ike, ị nwere ike ịtọ nke a elu dịka ịchọrọ. Ọ bụrụ na i meghị, mgbe ahụ ọ ga-abụ nhọrọ ndabara nke 1. Iji chọpụta ọnụọgụ cores ị nwere na sistemụ gị, mebie koodu a:
Ihe atụ mmepụta nke cores LinuxCapable test operating system nwere:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, anyị nwere 2 cores, otú na (mee) iwu, anyị na-eji (-j 2).
Mara, ntuziaka ejirila (altinstall) kama ndabara (wụnye) n'ihi na ọ ga-edegharị ndabere faịlụ python3 binary python faịlụ /usr/bin/python.
Ntuziaka ahụ egosila gị otu esi etinye Python 3.10 kachasị ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ Fedora Linux gị site na iji ma ebe nchekwa Fedora ma ọ bụ wụnye site na ịchịkọta faịlụ isi mmalite Python ọhụrụ.
Categories Fedora Tags Python Mail igodo